Ukuhambisa eMoscow: lokho futhi kangaki ayiswe inhlokodolobha?
Imisebenzi zokukhiqiza, wezoHwebo kuhlobene eduze ahlukahlukene izinhlobo lokuthumela, ngoba ngaphandle ezokuthutha ungatholi izinto zokusetshenziswa oyifunayo, hhayi ukuthumela izimpahla kumthengi hhayi ukuthenga kubadayisi nezinto ezidingekayo kanye nobuchwepheshe.
Kunezinhlobo eziningana yezokuthutha wezimpahla: kwezidingo ngemgwaco, ujantshi lokuthumela, thumela nge indiza noma umkhumbi. Ngokuvamile, ukhetho best kuyinto ukulethwa isitimela. isivinini Operational, ingashintshwa ukuze izinqola izimpahla, amanani amancane izikhathi ukulethwa iDemo - izinzuzo main of zinomsebenzi kwaloliwe.
Emadolobheni enkulu yezimboni noma ukuthengisa, ezifana, isibonelo, eMoscow, ezokuthutha imisebenzi ukuthuthukiswa ikakhulukazi kahle. Kuningi izinkampani zokuthutha ukuhlinzeka uhlu olubanzi amasevisi, iklayenti, sicela uthintane inkampani unekhono ukuthutha noma iyiphi ivolumu wezimpahla kunoma edolobheni, ezweni noma ngisho kwelinye izwekazi.
Ukuhambisa eMoscow abazenzi ehlukeneyo izinhlobo zokuthutha. zokuthutha indlela luncike ibanga kanye uhlobo imoto. Yini uvame ayiswe inhlokodolobha?
Ngo izimoto, ikakhulukazi ezimotweni ngokuvamile zithutha ekhaya Imishini kanye nemishini ehhovisi. Lokhu wezimpahla kudinga ezokuthutha ekhethekile, kumele Ngakho-ke kufanele kuhlangabezane nakho kwezimo ezithile ekalishi. Iziqukathi nge izimpahla liyakushunyayelwa kuvikelwe ku van, nge ematfuba abukhali, ushayela emigwaqweni ogcwele izikhisi futhi imigodi, kumele izimpahla fixed emotweni, okuzokwenza ukuqinisekisa ukuphepha yayo ngesikhathi hambo.
Kaningi, eMoscow bathumela nezinto zokwakha. Lo mkhiqizo elula kunazo ukuthutha e izitimela. Ukuze uhlobo wezimpahla ngamunye uye wazakhela izinhlobo olukhethekile izimoto. Ngokwesibonelo, imithi zokwakha is sizikhandle ibekwe izinqola platform. okunamathiselwe Namandla ngesimo ubuhlalu futhi amabhande ngokuphephile ulungise umthwalo ngesikhathi uhambo.
amabhasi elikhulu nezimoto - olunye uhlobo wezimpahla, okuyinto kuqhathaniswa ngokuvamile uyiswa enhlokodolobha. Uma ibanga incane, inqubo angaya lapho uya khona ngaphansi kwamandla ayo. Kodwa okungcono kukho - zokuthutha esebenzisa ujantshi ezinqoleni. ukuthutha Vula, yesikhulumi noma esitsheni yokuhlala ngokuphelele omningi imishini noma izimoto.
Ngakho ukuba sithwale izimpahla, kubaluleke kakhulu, kungakhathaliseki ukuthi kwakungesani, enokwethenjelwa kakhulu ukuthumela ngendiza. esinejubane futhi service enhle ngaso sonke isikhathi ukulethwa elingenazinkinga kwezimpahla lapho zilibangise khona.
Ngokwesibonelo, ujantshi zokuthutha kusukela Petersburg eMoscow lidumile abathwali eziningi. Ezitimeleni, ungakwazi ukuthutha sanoma yisiphi izimpahla: izimpahla nezinqola ezimboziwe ithuthwe, okuyinto kufanele ivikeleke emoyeni futhi umswakama phezu ezisekelweni ukulingana kahle ehlathini, futhi loading athula ukhululekile ngokwanele. Njengoba iziqukathi zithutha ezisekelweni noma zikagesi wosayizi omkhulu. amadivaysi Special ngokuphephile ubambe umthwalo ngesikhathi hambo. Tank inqola uketshezi kanye amagesi kuncibilike, futhi kungenziwa kalula uthuthwa esiqandisini imikhiqizo okonakalayo nezimpahla edinga lokushisa ethile.
Imigomo ukulethwa kwezimpahla, kuye ngokuthi ibanga into target ziyahlukahluka ejele usuku olulodwa kuya iviki elilodwa, okuyinto wanelisa amakhasimende amaningi.
Rail zokuthutha kusukela Petersburg eMoscow esivumelana kumakhasimende kakhulu, ngoba ungakwazi ngokushesha futhi ngezindleko kancane ukuthutha sanoma yisiphi izimpahla ngesitimela.
Ukuhambisa eMoscow yizinkampani ezokuthutha, okuyinto ngokushesha nangokunembile izimpahla ezivela noma yikuphi emhlabeni.
1c Process Automation Trade C 10.3 abahleli.
Ukumiswa izinkampani namalayisensi - ukuthengiselana zomthetho ethandwa
Isimiso kuhlelwe ukwakhiwa kanye nezici zayo
Ukuthuthukiswa ukucabanga ezinganeni bobudala obungefani
Uyithola kanjani isigaba Boxing
Inkukhu amaphiko ijulile okuthosiwe: zokupheka best
Yeka indlela eligoqiwe ithawula: amathiphu, izithombe
Ukudla ushizi amaqebelengwane ushizi: indlela yokunciphisa okuqukethwe ikhalori. cheesecakes zokudla: zokupheka kanye namasu ukupheka
Umuthi 'Forlaks ". Izibuyekezo. Incazelo. imfundo
I-Ultraviolet irradiator "Sun" (ukubuyekezwa)